Masjid lagu xadgudbay dalka Malaysia - BBC News Somali
Masjid lagu xadgudbay dalka Malaysia
2 Nofembar 2018
masaajidka Kota Kinabalu
Maamulka masaajid ku yaalla waddanka Malaysia ayaa mamnuucay in dadka dalxiiseyaasha ah ay soo booqdaan, ka dib markii internet-ka lagu shaaciyay muuqaalka labo gabdhood oo qoob ka ciyaar ku sameynaya Masjidka hortiisa.
Gabdhahan oo xirnaa dhar gaagaaban, jirkoodana uu meelo ka qaawanaa ayaa muuqaal laga duubay iyagoo ku ciyaaraya afaafka hore ee masjidka, oo ku yaalla magaalada Kota Kinabalu ee ka tirsan jasiiradda Borneo.
Booliska dalkaas ayaa hadda isku dayaya iney aqoonsadaan dumarkaas, oo lagu qeexay in muuqaal ahaan ay u egyihiin dadka ka soo jeeda bariga Aasiya.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda dalxiiska ee gobolka Sabah ayaa sheegay in cajaladda la shaaciyay ay muujisay "inaan wax xushmad ah loo muujinin dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysta masjidkaasi".
Maalintii Axadda ahayd ayuu guddoomiyaha maamulka Masjidkaas sheegay in gaadiidka dadweynaha aan loo oggolaan doonin iney dad dalxiiseyaal ah geeyaan masjidkaasi.
Wuxuu sidoo kale sheegay iney arrintaas kala sii hadli doonaan hay'adaha ay khuseyso, si looga hor tago in mar kale ay dhacaan falal noocan ah.
Dadka ajaanibta ah ee dalxiis ahaanta u booqda masaajida ku yaalla dalka Malaysia ayaa lagu boorriyay iney is asturaan.
Dhacdadan ma aha tii ugu horreysay ee nooceeda ah oo laga soo tabiyo waddanka Malaysia, gaar ahaan gobolka Sabah.
Masjid weyn oo laga dhisayo Athens
27 qof oo ku dhimatay weerar lagu qaaday Masjid
Gabar Muslim ah oo lagu dilay meel u dhaw masaajid ku yaalla Mareykanka
Sannadkii 2015-kii ayay mas'uuliyiinta gobolkaas ku eedeeyeen koox dalxiiseyaal ah iney isku qaawiyeen dusha sare ee buur lagu cibaadeysto, ka dib markii uu dhacay dhulgariir dilay 16 ruux.
Xigashada Sawirka, SABA INFO
Sarkaal maxali ah ayaa ku tilmaamay dhacdadan "mid xushmad daro ah"
Marar kale oo ay dad dalxiiseyaal ah dhibaato kula kulmeen waddamo ay ajnabi ku yihiin
Bishii Janaayo ee sannadkan 2018-ka: 10 dalxiise oo ay ku jiraan 5 qof oo u dhalatay Ingiriiska ayaa loo maxkamadeeyay arrimo la xiriira anshax xumo dhanka galmada ah oo la sheegay iney ku sameeyeen waddanka Cambodia.
Bishii Nofeembar ee sannadkii 2017-kii: 2 qof oo u dhalatay Mareykanka ayaa lagu xiray dalka Thailand, ka dib markii ay iyagoo qeybo ka mid ah jirkooda qaawanyahay tageen goob lagu cibaadeysto.
Bishii Meey ee ee sannadkii 2017-kii: Gabar dharka xayeysiisa ayaa caro ka abuurtay dalka New Zealand, ka dib markii ay iyadoo qaawan sawir iskaga qaadday meel loo aaminsanyahay iney tahay goob barakeysan.
Bishii Abriil ee sannadkii 2014-kii: Dalka Sri Lanka ayaa laga soo musaafuriyay haweeney u dhalatay dalka Ingiriiska, ka dib markii lagu arkay shaabbad ka uu ku sawiranyahay ilaah ay dadka waddankaas qaarkood caabudaan oo ay ku xardhatay garabka.
Haweeneydaas ayaa goor dambe magdhow ahaan loo siiyay lacag dhan 5,000 oo doolar, ka dib markii maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Sri Lanka ay xukuntay in arrinteeda si khaldan looga dhigay fadeexad.
Taliyaha militariga Soomaaliya iyo saraakiisha kale ee ku lugta leh dagaalka Guriceel
"Maxamed Bin Salmaan wuxuu qorsheeynayaa dilkeyga"
Cabdul Fataax Al-Burhan: Waa kumaa ninka la wareegay talada dalka Suudaan?
Duuliyihii Mareykanka ee 11-ka maalmood u xirnaa Ceydiid oo xil sare u tartamaya
20 Oktoobar 2021
Muxuu yahay filimka Soomaalidu jileyso ee labada jeer abaalmarinta ku guuleystay?
Turkiga oo qaaday tallaabo dhabar jab ku ah reer galbeedka oo ay ugu horreeyaan Mareykanka iyo Faransiiska
23 Oktoobar 2021
Afar arrimood oo lagu xusuusto Dowladdii Kacaankii Siyaad Bare
21 Oktoobar 2021
19 Oktoobar 2021
Gabdho walaala ah oo Gaalkacyo ku xusay dilkii Qadaafi 10 sano ka dib
11 Jannaayo 2021
Daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshii Korneel Qadaafi iyo sidii loo qabtay
Haweeney boolis ah oo qoyskeedii iyo saaxibkeed u dishay lacag darteed